Fandinihana lalina ny World of Warcraft: Burning Crusade Classic | BlizzCon, Klasika, Vaovao | WoW Guides | WoW Guides
World of Warcraft: fandinihana lalina ny Crusade Classic
Adrian Da Cuna | | Blizzcon, Classic, About us
Mpanamboatra mpitarika Holly Longdale, mpitantana ny famokarana Patrick Dawson ary Lehiben'ny injenieran'ny lozisialy Brian Birmingham avy amin'ny ekipan'ny WoW Classic, diniho tsara Mirehitra Crusade Classic amin'ity latabatra boribory BlizzConline ity.
Mampiavaka ny Mirehitra Crusade Classic
Toy ny fanitarana rehetra, Mirehitra Crusade Classic misy atiny maro karazana azon'ny mpilalao zahana. Amin'ny fanombohana sy mandritra ny fanavaozana ny atiny ho avy dia ho hitan'ny mpilalao:
Tany vaovao hizaha: amin'ny alalàn'ny Dark Portal mankany Outland.
Hazakazaka roa azo lalaovina: Miadia ho an'ny Horde miaraka amin'ireo elfan'ny rà mba hahita loharanom-pahefana arcane vaovao, na miditra amin'ny laharan'ny Alliance miaraka amin'ny draenei hanampy azy ireo hahita trano vaovao taorian'ny sesitany tany Outland.
Sands: Angony ireo mpiara-miasa aminao ary asehoy izay azonao atao amin'ny fihaonana 2v2, 3v3 na 5v5 amin'ny kianja toa ny Circle of Trials na ny Ring of Blood.
Fiakaram-panidina: Mandosira any amin'ny lanitra mikorontana any Netherstorm ary misandrata mankany amin'ny lohasaha Shadowmoon ratsy fanahy rehefa tonga any Outland ireo fiakarana manidina.
Fitakiana tranomaizina sy fanafihana: Mandresy ny tranomaizina misy mpilalao 5 sy tranomaizina mahery fo miorina ao amin'ny trano mimanda kristaly ao Tempest Keep, na manangana andiana mpilalao 10 hamakivaky ireo lalantsara misy an'i Karazhan izay manahirana ary miomana amin'ny fifandonana farany amin'ny Kil'jaeden ao amin'ny Plateau of La Fuente del Sol ho an'ny mpilalao 25.
firavaka: Manorata vatosoa azo ampidirina ao anaty fitaovan'ny mpilalao miaraka amin'ny asa firavaka.
Fihetsiketsehana ny Aldor sy Scryers: misafidy avy amin'ny ankolafy ny Aldor na Scryers ao Shattrath hahazoana ny valisoa tsy manam-paharoa.
Mamorona a paladin ao amin'ny Horde na a mpanasitrana ao amin'ny Alliance.
Miakatra amin'ny haavo 70 ary mahazo fidirana amin'ny fahaiza-manao kilasy vaovao, ankoatry ny zavatra hafa.
Mirehitra Crusade Classic tonga velona
Toy ny WoW Classic, mitondra amin'izao fotoana izao ny fanitarana 13 taona lasa izay Ny Crusade nirehitra nitondra olana be dia be ho anay izany. Ny iray amin'ireo fanamby dia ny famindrana ny angon-drakitra fanitarana rehetra - atiny, fitsipi-dalao, fitondrantenan'ny fahavalo, sy maro hafa - ho amin'ny kaody maoderina, miaraka amin'ny fanatsarana teknika rehetra, ny fanatsarana ny fahombiazana ary ny fanamboarana bibikely izay nampiharinay nandritra izay taona maro izay.
Izany dia mitaky fanovana angon-drakitra maherin'ny 750 avy amin'ny endrika 000 ho lasa iray ampiasaintsika ankehitriny. Soa ihany fa manana injeniera talenta sy manolo-tena hampiasa soratra manamora ireo fivadihana ireo, na dia tsy midika akory izany fa ireo fanovana mandeha ho azy ireo ihany no azontsika ampiasaina. Nihazakazaka ilay mpanjifa taloha izahay ary nijery ny fomba niasan'ny raharaha Ny Crusade nirehitra tany am-boalohany hampitaha azy amin'ny fiovam-po natao ho an'ny Mirehitra Crusade Classic ary hamarino fa mandeha araka ny tokony ho izy ny zava-drehetra.
Tianay antoka koa fa rehefa manao ireo fiovam-po ireo izahay dia mitahiry izay fanamboarana bibikely natao tamin'ny lasa mba hanomezana traikefa tsy tapaka eo anelanelan'ny WoW Classic y Mirehitra Crusade Classic.
Nandany fotoana be dia be izahay namakivakiana ilay kaody referansa taloha mba hahazoana antoka fa mahazo tsara izany ary mitahiry ireo fanamboarana bibikely. Hatramin'ny 13 taona no lasa hatramin'ny nanombohan'ny Ny Crusade nirehitraTsy maintsy mijanona ihany koa isika mba hanamafisana fa ny fahatsiarovantsika dia mifanaraka amin'ny tena zava-misy marina. Mora amin'ny fotoana ny manova ny fomba fijerintsika: mety hahita zavatra isika ary hieritreritra fa fahadisoana izany, saingy angamba ny fomba fiasa nataony Ny Crusade nirehitra. Ny fananana loharano azo antoka hanamafisana izany dia singa iray manapa-kevitra.
Ny kaody maoderina koa dia manome fitoniana bebe kokoa ho an'ny mpanjifa. Ireo mpizara dia nalamina tamin'ny silo teo aloha, fa ankehitriny ianao dia afaka manararaotra ny tombotsoan'ny fotodrafitrasa rahona. Io dia ahafahantsika misoroka olana toy ny lesoka "tsy fahita tsy hita" rehefa manandrana miditra amin'ny trano-maizina na fanafihana ny mpilalao.
Indraindray ny famindrana ireo angona ireo dia misy vokany tsy ampoizina. Tamin'ny fitsapana voalohany dia nahita zavatra toy izany izahay: tsy nitanjaka ny elf ra lahy na dia nino aza ny mpanjifa fa miakanjo izy. Vetivety dia tsikaritray fa tsy nalahatra tsara ireo endriny, na dia hita miharihary aza ny géometry ny fitafiany.
Raha ny momba an'i draenei, tamin'ny voalohany dia toa lava loatra izy ireo teo amin'ny efijery famoronana toetra, fa ny tena olana dia niseho tamin'ny efijery Dun Morogh izy ireo, izay manana haavon'ny fakantsary mety ho an'ny dwarves sy gnome.
Hitanay ihany koa fa nisy rano nipoitra tao amin'ny Saikinosin'i Hellfire, izay tsy tokony hisian'izany. Tsy manana ranomasina toa an'i Azeroth i Outland, saingy zavatra azonay namboarina io.
Fiovana ho avy
Ny fitsipika fototry ny WoW Classic Tokony ho marina amin'ny kinova voalohany araka izay azo atao. Mba Mirehitra Crusade Classic izahay koa te-hahazo antoka fa manolotra traikefa akaiky Ny Crusade nirehitra, raha mitazona ireo singa tena ilaina amin'ny fanitarana izay andrasan'ny mpilalao. Nametraka fanovana hafa koa izahay mba hanomezana anao traikefa tsara rehefa tonga any Outland ianao.
En WoW Classic ninia nanangana ny fihetsika "spell bundling" tamin'ny lalao tany am-boalohany isika. Na dia fahagola teknolojia aza tamin'ny ankapobeny, ny hevitra hamerenana azy io WoW Classic Nahaliana ny mpilalao izany, ary tsapanay fa zavatra tokony hampidirinay izany noho ny antony marim-pototra. Na izany aza, ny famonosana ny tsipelina dia miteraka olana latency voajanahary ho an'ny mpilalao. Nifarana tamin'ny fahazoana tatitra momba ny bibikely avy amin'ny mpilalao tamin'ny famosaviana sy ny fahaiza-manao toa an'i Blink na Pyroblast izahay, kanefa ny olana nipoitra dia ny fahanginana nahatonga azy ireo tsy hiasa araka ny nampoizina. Mba Mirehitra Crusade Classic Izahay manary ny fametahana tsipelina mba hanatsarana ny traikefa ankapobeny.
Ny vondrom-piarahamonin'ny tarika izao dia manana traikefa bebe kokoa ihany koa, noho izany dia tianay ny hanolotra anao ireo fanamby miandry anao rehefa hiverina amin'ny tarika tianao indrindra ianao. Mba hanaovana izany dia te hampiditra kinova sarotra kokoa momba ny fonja-maizina sy lehiben'ny fanafihana izahay, hanafoanana ny fanovana izay nampiharina tamin'izy ireo tamin'ny fanitarana manaraka. Na izany aza, azontsika atao ny mitazona fanovana sasany natao ho an'ny rehefa nahasosotra kokoa ireo volavolan'asan'ny voalohany fa tsy mahaliana. Ohatra, M'uru tany am-boalohany nanana fahaiza-manao avo handavana ny famosaviana, nahatonga ny mpilalao hanilihana ny casters amin'ny vondrona. Vetivety izahay dia niresaka an'ity olana ity tamin'ny fotoana nilana azy, ary heverinay fa zavatra hotehirizinay izany rehefa tonga eo amin'ny Sunwell Plateau ity lehibeny ity, na dia mihena aza ny fahasalamany, izay nahena, dia hiverina amin'ny fanjakana tany am-boalohany. Ny mpilalao dia nangataka anay mba haka kinova amboalohany an'ny boss mba hahitana raha ny tombotsoan'ny traikefa dia manampy azy ireo handresy ireo mpampiasa sarotra teo aloha, ary tianay hanome azy ireo izany fotoana izany.
PvP sy fifandanjan'ny vondrona
Tianay antoka fa mitahiry ny mombamomba ireo ankolafy ireo izahay, saingy fantatray ihany koa fa misy ny tsy fitoviana eo amin'ny tombo-kase paladin an'ny Horde sy ny Alliance, satria ny Seal of Blood (Horde) dia mahery tokoa raha oharina amin'ny Seal of Vengeance (Alliance ). Mba hamahana ity olana ity, ny Horde sy ny Alliance dia hanohy hahazo ny tombo-kasen'izy ireo amin'ny haavo 64, saingy rehefa mahatratra 70 izy ireo dia hahazo ny tombo-kasen'ny ekipa iray hafa.
Lafiny iray hafa izay hodinihinay ihany koa ny fomba fanatanterahan'ireo mpilalao ny lisitra ho an'ny kianja. Amin'ny famoahana ny arena tany am-boalohany Ny Crusade nirehitra, mpilalao dia mety hanana mpilalao mitovy amin'ny an'ny sampana nisy azy ireo - raha nandray anjara tamin'ny kianja 3v3 izy ireo dia mpilalao telo fotsiny no ao amin'ny lisitra. Midika izany fa, raha misy tsy afaka milalao vetivety dia tsy afaka nanao izany ny ekipa iray manontolo. Amin'ny Mirehitra Crusade Classic avelantsika hanana lisitra indroa ny isan'ny mpilalao mifanaraka amin'ny sampana. Noho izany, ny ekipa dia afaka manolo mpilalao raha ilaina ny manohy mandray anjara amin'ny kianja.
Ho fanampin'izay, mikasa ny hampiasa algorithmin'ny matchmaking maoderina izahay mba hampifanaraka haingana kokoa ny mpilalao amin'ireo mpanohitra mitovy lenta amin'ny fahaizany nefa tsy very ny fepetra takiana amin'ny fividianana ny fitaovan'ny Arena mandritra ny vanim-potoana manaraka.
Fidirana amin'ny elves amin'ny ra sy Draenei
Miaraka amin'ny famoahana ny patch preliminary ho an'ny Mirehitra Crusade Classic, mpilalao dia hanana fidirana amin'ny alàlan'ny hazakazaka Blood Elf sy Draenei alohan'ny fisokafan'ny Dark Portal. Io dia hahafahan'izy ireo misavoana maraina hanatevin-daharana ireo namany any Outland avy eo.
Mba hahamora ny fanajan'ireo mpilalao ny atiny farany atiny farany sy hijerena ireo fitaovana miaraka amin'ny namany dia nametraka drafitra famoahana atiny mety ho anay izahay Mirehitra Crusade Classic mizara ho dingana 5. Toy ny mahazatra amin'ny dingana voalohany amin'ny fampandrosoana dia mety hiova izany drafitra izany amin'ny fotoana rehetra ary te-hihaino anao izahay.
Dingana 1: fanokafana ireo tarika Karazhan, Gruul's Lair ary Magtheridon's Lair
Dingana 2: Seranana Shrine Cavern, Keep Tempest, ary Arena Season 1
Dingana 3: Hyjal, Tempolin'i Black ary Arena Season 2
Dingana 4: Zul'Aman sy Arena Season 3
Dingana 5: Ny Loharanon'ny Masoandro sy ny vanim-potoana 4 amin'ny kianja
Ahoana ny fomba hihaonana ny filan'ny mpilalao isan-karazany
Tianay ny hahazoana antoka fa mamaly ny filan'ny mpilalao samihafa izahay WoW Classic. Ny tanjonay dia ny manolotra fahafaha-manao isan-karazany raha ny patch preliminary an'ny Mirehitra Crusade Classic, samy ho an'ireo izay manapa-kevitra ny hiroboka ao anaty ny Mirehitra Crusade Classic tahaka ireo izay misafidy ny hijanona ao WoW Classic amin'ny toetrany ankehitriny.
Hereinafter, ny mpizara lozisialy ankehitriny an'ny WoW Classic ho lasa mpizara mandroso miaraka amin'ny fidirana amin'ny Mirehitra Crusade Classic sy ny fanavaozana ny atiny. Rehefa voahodina ilay patch dia tsy maintsy manapa-kevitra ny mpilalao amin'izay tiany hatao amin'ny tarehin-tarehiny izy ireo: hizotra amin'ny atin'ny Mirehitra Crusade Classic na hitohy amin'ny fanandramana an'ny WoW Classic?
Ity fanapahan-kevitra ity dia tsy hiankina amin'ny toetrany tsirairay. Noho izany, hanana fahalalahana bebe kokoa ny mpilalao hisafidy ny karazana traikefa tian'izy ireo hiaina: hisy ireo izay maniry ny hijery ny fanitarana manaraka miaraka amina toetra avo lenta voaomana hamaky ny Dark Portal na hamorona draenei na elf-dra vaovao hahitana ireo faritra vaovao. manomboka, fa hisy koa mpilalao manana antonony antonony izay aleony mijanona ao amin'ny tontolon'ny Classic Era mba hanohy handroso sy hilalao any miaraka amin'ireo namany.
Ho an'ireo izay mbola tsy nanana fotoana nilalaovana WoW Classic na ho an'ny mpankafy Ny Crusade nirehitra izay mazoto hiverina any Outland izao, dia hanolotra fomba fiakarana ho any amin'ny ambaratonga 58. Ireo fiakarana ireo dia hoferana ho iray isaky ny kaonty, tsy azo ampiasaina amin'ny sehatry ny Era Klasika, ary tsy azo ampiharina amin'ny Blood Elves na draenei. Ireo mpilalao izay misitraka an'ity ambaratonga ity dia hahazo zavatra vitsivitsy any an-tranomaizina manga, ny fahaiza-mitaingina haavo 40, ary ny tendrombohitra. Ny endri-tsoratra noforonina tamin'ity ambaratonga ity dia tsy hahitana asa, raha ny tarehin-tsoratra efa misy kosa dia hitazona ny asany nofidiny.
Raha manapa-kevitra ny hanohy milalao ianao WoW Classic, afaka milalao any amin'ny sehatry ny Classic Era ianao, izay ho azo amin'ny famoahana ny patch preview Mirehitra Crusade Classic.
Tianay antoka fa manana lanjany ny fanapahan-kevitrao ary fantatray fa mety te-hilalao toetra amam-panahy ny mpilalao sasany WoW Classic toy ny Mirehitra Crusade Classic, noho izany dia hampandehanay serivisy misy karama tsy voatery atao izay hahafahanao manokatra ny toetran'ny toetranao amin'ny mpanjifa roa tonta ary amin'izany dia manohy ny adinao amin'ny andro roa. Azonao atao ny mamaky fampahalalana bebe kokoa momba izany ao amin'ny lahatsoratray Toetra sy fanjakan'ny tontolon'ny warcraft classic y Mirehitra Crusade Classic.
Mirehitra Crusade Classic fandefasana amin'ity taona ity
Fantatray fa ny fanirianao bebe kokoa mirehitra dia mahafantatra hoe rahoviana no hivoaka izy io Mirehitra Crusade Classic. Amin'ity taona ity dia amin'ity taona 2021 ity. Tsy ho ela dia handamina beta izahay ahafahan'ny mpilalao manana fotoana hiverenana any Outland ary hanome anay ny heviny momba ny fahatsapana nananany. Ny ataonay laharam-pahamehana dia ny faharetan'ireto fitsapana ireto dia ampy hahalalana betsaka ny hevitrao. Ho fanampin'izay, izahay dia te-hahazo antoka fa ireo izay mbola mikorisa amin'ny Naxxramas na atiny hafa dia manana fotoana koa.
Ny vondrom-piarahamonina dia nandray anjara lehibe tamin'ny fanovana WoW Classic fahombiazana, noho izany tsy afaka miandry anao izahay hanandrana ny beta an'ny Mirehitra Crusade Classic ary mandray anjara indray mandeha mamorona vokatra mety indrindra. Tianay ny miasa ao WoW Classic Ary izahay dia misaotra anao noho ny fanampiana anay hamelona an'i Azeroth. Araho hatrany ny tranonkala ofisialy mba tsy hahalalanao fampahalalana! Mandritra izany fotoana izany, mifankahita amin'ny WoW Classic.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: WoW Guides » About us » World of Warcraft: fandinihana lalina ny Crusade Classic
World of Warcraft Classical sy Burning Crusade Classic endri-tsoratra sy fanjakana
Araho hatrany ny World of Warcraft amin'ny andro faharoa an'ny BlizzConline